Coldoon iyo Maxkamaddii saaka. | Salaan Media
Coldoon iyo Maxkamaddii saaka.
June 26, 2019 | Published by: Hamse
Abbaaro 8:30 ayaan soo gaadhay Maxkamadda gobolka Maroodijeex oo saaka lagu dhagaysanayay dacwadda Cabdimaalik Sh. Muuse Coldoon, guud ahaan waxa aad loo adkeeyey ammaanka aagga Maxkamadda iyada oo la xidhay waddooyinka soo gala Maxkamadda, gaadiidkana laga leexinayay.
Waxa hoolka soo buuxdhaafiyay dad u yimi in ay dhagaystaan dacwadda.
Waxa dhagaysigii maalintii hore ee dacwadda ay codsadeen xeer-ilaalintu in fursad la siiyo si ay u keensadaan maragyo ay sheegeen in ay ka maqanaayeen markaa, sidaa awgeed waxa ay keenee saaka qaar ka mid ah waalidkii ardayda, cid se maamulkii dugsiga ka socotay ishaydu may qaban.
Waxa bilaabantay dacwaddii oo lagu dhagaysanayay markhaatiyada , waxa ay ahaayeen saddex qof, laba haween ah iyo hal nin.
Gabadhii ugu horraysay oo magaceeda ku sheegtay Aamina Cismaa ayaa waxa ay sheegtay in Coldoon caayay dugsiga iyo ardaydiisa, waxana ay sheegtay qoraallo loo sheegay Oo aflagaaddo ah inuu dugsiga u gaystay, waxayna ku dhaaratay in Coldoon ku sheegay in ay ardayda isku jinsiga ahi isu galmoodaan.
Qofka 2aad oo ahaa Sh. Maxamed Maxamuud Xiiray(Sh.Aadan-Siiro walaalkii) oo hore u ahaa Guddoomiyihii wanaag farista iyo xumaan reebista haatanna ka mid ah guddida waalidka dugsi Abaarso ayaa isna kaddib markii la dhaariyey ku dooday in Coldoon warar aan la hubin uu ka faafiyay dugsiga sida galmada dadka isku jinsiga ah.
Garyaqaan Jamaal-Mandeela ayaa waydiiyay goorta uu ka mid noqday guddida dugsiga, waxaana uu sheegay markii uu ka tagay gudida wanaag farista iyo xumaan reebista in waalidku ay ku dareen guddida waalidka dugsiga Abaarso.
Sh. Maxamed waxa la waydiiyay sababtii keentay in laga joojiyo shaqada wanaag farista, waxaanu uu ku sheegay in ay ahayd markii uu ku dooday in “Magta ragga iyo dumarku siman yihiin” walina uu dooddaas qabo.
Garyaqaan Mandeella oo la kaftamaya ayaa waydiiyay “Magta ma in 100 la wada noqdo ayaad qabtaa mise 50” waxaanu uu Sheekhu ku Jawaabay “Allaylehe waxaan jeclaan lahaa in xaga 100 ka la isugu guuro”
Mar kalana Mandela ayaa Sheekha waydiiyay guddida waalidk Abaarso inta xubnood ee ay ka kooban yihiin, waxa se uu sheegay in aanu garanayn.
Waxa Sh. Maxamed la waydiiyay sawirada uu Coldoon baahiyay in ay yihiin ardayda dugsiga iyo in ay yihiin been abuur uu Coldoon samaystay, waxana uu sheegay inta uu arkay in ay yihiin ardayda dugsiga.
Sheekha ayaa waxa kale oo la waydiiyay ardayda carrabka laalaadinaysa sida uu u arko, waxana uu sheegay in uu qalad u arko, sidoo kale in hablaha iyo innamada wada ciyaaraan kubbad ama meel ay isugu yimaaddaan ayuu ku sheegay in ay qalad tahay.
Waxa kale oo la waydiiyay Sheekha hablaha jidhkooda maxaan cawro ahayn, waxana uu ku Jawaabay “Maa cadaa Al kaffayn wal wajh” oo macnaheedu yahay labada gacmood intooda hore iyo wejiga mooyaane in aanay bannaanayn in gabadha jidhkeeda wax kale laga arko, waxa Mandeela uu usii raaciyay sida uu arko hablaha dugsiga dhigta ama ka baxay ee sawirada iyo muuqaalada kusoo baxa iyo goonnooyin gaagaaban xidhan, isla jeerkaasna Timo qaawan, qaarkoodna ay sheegeen kolkii ay Maraykan tageen in waalidkood iyo diintooduba ay cidhiidhi ku haystay, se kolkii ay Abaarso galeen ay heleen xasillooni, loona sheegay in ay sida ay doonaan u fekeri karaan, waxana uu Sh. Maxamed ku Jawaabay in arrintaasi ay qalad tahay.
Waxa uu kusoo xidhay hadalkiisa in waxyaabahaas lasoo sheegay Oo dhami ay qalad yihiin, sidoo kalana in la faafiyaana ay qalad kale tahay.
Ugu dambayn waxa uu sheegay Sh. Maxamed in marna waxyaabahaas lasoo sheegay aanay guddida waalidku ka kulmin hal marna.
Ugu danbayn waxa loo yeedhay haweenay magaceeda la yidhaado Farxaan oo sheegtay in carruuri u dhigato qaarna Maraykanka loogu diray, waxana ay sheegtay in Coldoon dugsiga caayay, sidoo kalena ku sheegay in diinta dadka lagaga saaro, waxa kale oo ay tidhi “waxa aan habeen u hoyday dugsiga si aan usoo ogaado waxa ka jira, waxbana kumaan soo arag”.
Waxa waydiimo dhawr ah waydiiyay xeer-ilaaliye C/raxmaan Iid , garyaqaannada Coldoon u doodayaana waxa ay sheegeen in aanay wax su’aalo ah waydiinayn waalidkan maadaama laba hore ay jawaabo ku filan ka hayaan.
Guud ahaan saddexda markhaati ee madasha yimi ayaa waxa ay ahaayeen dad waawayn oo aan isticmaalin baraha bulshada se sida hadalkooda ka muuqanaysay loo soo sheegay in Coldoon dugsigaas caayay, waxana ay lahaayeen qaarkood muxuu Coldoon xamar iyo Farmaajo wax uga odhan waayay.
Ugu danbayn waxa laga codsaday xeerilaaliyihii in uu keeno caddaymaha ay Coldoon ku haystaan, waxana uu sheegay in wali wax ka dhiman yihiin, se uu keeni doono maalinta Sabtida oo loo ballansan yahay doodda difaaca ee Coldoon.
Garsoorihii Maxkamadda ayaa sheegay in fadhigu xidhan yahay, sabtidana la isu soo noqon doono 29/6/2019, waxa aannu u kacnay in aannu salaanno Coldoon oo ku jiray qafas bir ah oo ku dhexyaalay gudaha madasha maxkamadda balse askar ayaa isku dayday in ay noo diidaan, Coldoon ayaana u sheegay askartii in halkan uu ka taliyo Garsooruhu, salaan tana uu u oggol yahay, sidaas ayaanu ku raacay Garsooruhu oo na loogu oggalaaday Salaan tii.
Kolkii aannu bannaanka usoo baxnay waxa aan arkayay dumar maagaya qareennadii difaacayay Coldoon una arkayay in ay dambaabeen oo nin wax caayay ay difaacayaan, se mid ka mid ah garyaqaannada ayaa u sheegay in ay caddaaladda Maxkamadda ay ku kalsoonaadaan, kolka sharciga la joogana aan caadifaddu shaqayn.
Marxuum Sidiiq Indho Oo Aas Qaran Loogu Sameeyay Hargeysa